रवि लामिछानेले कांग्रेस बाट राजनीति गर्ने – All top Here
Home/समाचार/रवि लामिछानेले कांग्रेस बाट राजनीति गर्ने
रवि लामिछानेले कांग्रेस बाट राजनीति गर्ने
काठमाडौं । चर्चित कार्यक्रम प्रस्तोता रवि लामिछाने अब राजनीतिक जीवनमा प्रवेश गर्ने भएका छन् । प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेसमा प्रवेश गरी त्यसैमार्फत रवि राजनीतिमा लाग्नसक्ने उनी निकट स्रोत बताउँछ ।
रवि निकटस्थहरुका अनुसार राजनीति नै गर्नुपर्ने अवस्थामा रवि कांग्रेसमै प्रवेश गर्नेछन् । ‘अहिले नै राजनीतिक मैदानमा प्रवेश गरिहाल्ने मनस्थिति देखाउनुभएको छैन’ लामिछानेका एकजना निकटस्थले भने ‘तर शालिकरामको आत्महत्यालाई लिएर आक्षेप लगाउने र जेलमै सडाउने षडयन्त्रमा (ने.क.पा.) नेतृत्वको सरकार सामेल भएकाले उहाँ लोकतान्त्रिक पार्टी कांग्रेसबाटै राजनीतिमा होमिनुहुनेछ ।’ source:nepalpana
भर्खरै काठमाडौं बाटअर्को ठुलो दु’खद खबर- !
भाडामा बस्ने लाई कोठाबाट निकाल्ने घरबेटी प’क्राउ